FARMAAJO oo Museveni la kulmay kadib aflagaadadii uu u gaystay Soomaaliya – Xigaal.com
HomeWARARKAFARMAAJO oo Museveni la kulmay kadib aflagaadadii uu u gaystay Soomaaliya
FARMAAJO oo Museveni la kulmay kadib aflagaadadii uu u gaystay Soomaaliya
Madaxweynaha Dalka Uganda Yuweri Museveni ayaa Magaalada Addis ababa kula kulmay qaar ka mid ah hoggaamiyayaasha Afrika ee ka qeybgelayay shir madaxeedkii 32-aad ee Miudowga Afrika.
Mr Museveni ayaa qoraal uu ku qoray Boggiisa Twitter-ka ku sheegay in isaga iyo Madaxweynaha Soomaaliya ay ka wadaha hadleen xiriirka labada dal, sidii loo adkeyn lahaa iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen amaanka, xiriirka iyo waxbarashada.
Kulankan ayaa yimid dhowr toddobaad kadib markii Museveni uu aflgaadeeyey Soomaaliya, isaga oo sheegay inaysan lahayn wax nidaam dowladeed ah.
Hadalkaas ayaa waxaa ka jawaabay wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo sheegay in Museveni iska hadlay, islamarkaana ay arrintan si hoose ugala hadli doonaa.
Si kastaba ma cadda haddii arrintan lagu soo qaaday kulankii Museveni iyo Farmaajo.
Uganda waxaa ay safka hore uga jirtaa waddamada Ciidamada AMISOM ka joogaan Soomaaliya,waxaana socda qorshe Ciidanka AMISOM looga saarayo dalka.
Museveni iyo hoggaamiyayaasha kale ee Afrika ayaa saaka isaga tagay Magaalada Adis ababa oo ay ku sugnaayeen dhowrkii habeen ee la soo dhaafay.
Kooxda Aaranjaan oo dib u hanatay talada Puntland
February 18, 2019 abdihamid WARARKA 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Burundi, kaddib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalkaas. Safarka Madaxweynaha ee Burundi ayaa ah kii u horeeyay, tan iyo […]
February 18, 2019 xigaal_lki6bw WARARKA 0
Safiirka Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa qaabilay Safiirka oo dib shalay ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii Kenya ay […]